ကူးယူရန် Genius Layering Tricks ၁၀ ခု - စတိုင်လ်
ယခုချက်ချင်းကူးယူရန် Genius အလွှာ ၁၀ ခု
အထူးသဖြင့်မင်းရဲ့ဗီဒိုထဲကအဝတ်အစားတွေကိုမင်းအများဆုံးရနေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမင်းရလိုက်တဲ့ခံစားချက်ကပိုကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။ မရ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်နည်းလမ်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးသောနေ့ရက်များကိုအနည်းငယ်သာအမှန်တကယ်ရောက်နိုင်သည်၊ သို့သော်အချို့သောအတွေးများဖြင့်မင်းရဲ့ခက်ခက်ခဲခဲငွေတွေကိုကုန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ ၀ တ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ? အောက်ပါပါရမီအလွှာလှည့်ကွက်များနှင့်။ မရ။ မင်းမှာသေချာတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွဲစပ်ဖို့နည်းလမ်းသစ်တွေအတွက်ဆက်ဖတ်ပါ၊ စွပ်ကျယ်အောက်ကနေပခုံးပေါ်ကနေအင်္ကျီကိုဖြတ်ထားတဲ့အသားကပ်တစ်စုံထက် midi စကတ်ကနေစလိုက်ပါ။
Turtleneck တစ်ခုရဲ့ Bralette
ဓာတ်ပုံ - ဖက်ရှင်အင်တာ
Tissue Turtleneck Tee, ၃၄.၅၀ ဒေါ်လာ၊ မှာ J. Crew
ကတ္တီပါ Bralet, $ 27; မှာ လမ်းလွဲသည်
ဓာတ်ပုံ - ဖက်ရှင်အပိုင်း
Tibi Suede Wrap Midi Skirt, $ 399; မှာ Outnet သည်
Madewell9'High-Rise Skinny Jeans, $ 129; မှာ Madewell ပါ
Statement Blouse တစ်ထည်ပေါ်မှ Long Vest
ဓာတ်ပုံ - Beauticurve
New Look Plus Shirt၊ ၃၁ ဒေါ်လာ မှာ ASOS
Studio Vest၊ ၂၃ ဒေါ်လာ မှာ Eloquii
VIENNA WEDEKIND ၁၀/၃၂
ဓာတ်ပုံ - ဗီယင်နာ Wedekind
macomber inc ၁၁/၃၂
Black Sheep Irish Fisherman's Sweater, ၁၂၉ ဒေါ်လာ၊ မှာ Orvis
Oversize Shirt, $ 39.90; မှာ Zara
Getty ပုံများ ၁၃/၃၂
ဆွယ်တာနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီအောက်မှပွင့်လင်းသောအ ၀ တ်အင်္ကျီ
BERLIN၊ ဂျာမနီ - နိုဝင်ဘာ ၀၄: Storm Westphal (@theadorabletwo) သည် Maison Scotch မှအပြာရောင်အဖြူရောင်အင်္ကျီရှည်၊ အနက်ရောင်သိုးမွေး turtleneck ဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ Ganni မှဂျင်းဘောင်းဘီအနက်ရောင်၊ ကျောပိုးအိတ်အနက်ရောင် Chloe Faye ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့၌ (Christian Vierig/Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Turtleneck ဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ ၃၄.၉၉ ဒေါ်လာ မှာ H&M
Scotch & Soda Maison Scotch Maxi Shirt ဂါဝန်၊ ၁၂၉ ဒေါ်လာ မှာ ဆိုကတည်းက
ဓာတ်ပုံ - @thegirlyoudidntnotice / Instagram ကို
Button Up Ribbed Bodycon Dress, ၂၂ ဒေါ်လာ၊ မှာ လမ်းလွဲသည်
Knotted White Cropped Tee, ၄၂ ဒေါ်လာ၊ မှာ တိုဘီ
တီရှပ်နှင့်သားရေဘောင်းဘီများပေါ်တွင်စလစ် ၀ တ်စုံ
ဓာတ်ပုံ - Chriselle အချက်
Silence + Noise Satin Shine Mini Slip Dress, ၅၉ ဒေါ်လာ၊ မှာ Urban Outfitters များ
7 လူသားအားလုံးအတွက် Vegan သားရေဘောင်းဘီ၊ $ 199; မှာ လှည့်သည် ၂၁/၃၂
ပခုံးပိတ်အင်္ကျီ + Oversize Vest
SYDNEY, AUSTRALIA - မေလ ၁၆ ရက်၊ Ellery မှအနက်ရောင် Hansen & Gretel Elodie စွပ်ကျယ်နှင့် Pipper စကတ်၊ ဂျော်ဂျီယာ Alice အပြင်ဘက်၊ May 16, 2016 သြစတေးလျ၊ ဆစ်ဒနီ (Christian Vierig/WireImage မှဓာတ်ပုံ)
JACQUEMUS Off-the-shoulder အစင်း cotton-poplin top, $ 266; မှာ Net-A-Porter
Long Waistcoat၊ ၁၆၉ ဒေါ်လာ မှာ Zara
Getty ပုံများ ၂၅/၃၂
BERLIN၊ ဂျာမနီ - မတ်လ ၂၉ ရက်၊ ဖက်ရှင်ဘလော့ဂါဆိုဖီယာ Grau သည် Zara မှဆော်လမွန်ပန်းရောင်စကတ်၊ Adidas မှအဖြူရောင်ဖိနပ်၊ Mango မှမီးခိုးရောင်ဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ Lancel Paris မှပန်းရောင်အနက်ရောင် clutch၊ Chanel မှအနီရောင်မီးခိုးရောင်ပဝါ၊ Rayban clubround မှနေကာမျက်မှန် ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့၌ Kapten & Son ကိုမတ်လ ၂၉ ရက် ၂၀၁၆ တွင်ကြည့်ပါ။ (Christian Vierig/Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ရွှေသတ္တု Pleat စကတ်၊ ဒေါ်လာ ၁၃၀; မှာ ထိပ်တန်းရှော့ပင်း
Textured ဆွယ်တာအင်္ကျီ၊ ၇၀ ဒေါ်လာ မှာ သရက်သီး
Getty ပုံများ ၂၈/၃၂
Turtleneck နှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်ပေါ်မှ Kimono အပြည့်
BERLIN၊ ဂျာမနီ - နိုဝင်ဘာ ၀၉: Fata Hasanovic (@fata.hasanovic / နောက်ဂျာမန်မော်ဒယ်များ) အနက်ရောင် turtleneck၊ ခါးမြင့်အပြာရောင်မိုးပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီကို ၀ တ်ဆင်သည်။ အဖြူရောင်အစက်များပါ ၀ င်သောအနက်ရောင် NA KD အင်္ကျီ၊ အနက်ရောင်ဆန်သောအဆင့်မြင့်လေးလံသောဘွတ်ဖိနပ်များ၊ ငွေရောင် sassy classy အိတ်တို့ဖြင့်ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် (Christian Vierig/Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
LA Hearts Chiffon Maxi Kimono, ၃၄.၉၅ ဒေါ်လာ၊ မှာ PacSun
ဂျင်းဘောင်းဘီထက် T-Shirt ဂါဝန်
ဓာတ်ပုံ - ပြီးတော့ငါအဝတ်အစားလဲတယ်
Swing Dress, ၁၆ ဒေါ်လာ၊ မှာ ထာဝရ ၂၁
Cello ဖျက်ဆီးခံရသော Skinny Jeans, ၂၅ ဒေါ်လာ၊ မှာ Charlotte ရုရှ
မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ကြော့ရှင်းသော maxi dresses
jimmy kimmel ရဲ့ဇနီးကဘယ်သူလဲ
tessa thompson ဘယ်သူနဲ့ချိန်းတွေ့လဲ